ညစ်ညမ်းသောလူမှုဆက်ဆံရေးကို“ ရွေးချယ်ခြင်း - ဖော်ထုတ်ခြင်း” - Paul J. လုပ်ခြင်းဖြင့်သွားပါစေ၊ သွားခွင့်ပြုပါ (၂၀၂၁) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
ညစ်ညမ်းသောလူမှုဆက်ဆံရေးကို“ ရွေးချယ်ခြင်း - ဖော်ထုတ်ခြင်း” - ပေါလ်ဂျေ Wright မှသွားခွင့်ပြုပါ၊ ခွင့်ပြုပါ ၂ (၂၀၂၁)
Wright, PJ Arch လိင်ပြုမူနေ 50, 393-399 (2021) ။ https://doi.org/10.1007/s10508-021-01922-z
လှည့ ်၍ တံခါးကိုပိတ်လိုက်” (Elsa - Disney's) ရေခဲသော)
ဤပြissueနာရှိနောက်ထပ်စာတစ်စောင်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကျိုးသက်ရောက်မှုများသုတေသနတွင်တတိယအကြိမ်ပြောင်းလဲနိုင်သောလက်ရှိချဉ်းကပ်မှု၏အန္တရာယ်များအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ရေးသားခဲ့သည် (Wright, 2021) ။ ဤစာ၏စာဖတ်သူများသည်ရှေ့ပြေးကိုဖတ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းစာတမ်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုတေသီများသည်တတိယအမျိုးအစားများကိုခန့်မှန်းသူများ (ဆိုလိုသည်မှာအပြာနှင့်အပြာစာပေအမျိုးအစားအလိုက်ကွဲပြားသောအချက်များ)၊ ဖျန်ဖြေသူများ (ဆိုလိုသည်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုသယ်ဆောင်သည့်ယန္တရားများ) အဖြစ်ဆက်ဆံသင့်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ ), သို့မဟုတ်မော်ဒကဲ (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုတားဆီးနိုင်သည်သို့မဟုတ်လွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည့်လူများနှင့်အခင်းအကျင်းများ),
အကြောင်းဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှောင်းပိုင်းတွင် ရေခဲသော ပါတီ, အာဗြဟံနှင့်ယှဉ်ပြိုင်သောအသက်အရွယ်၌ကျွန်ုပ်၏သမီးကိုမကြာသေးမီကမှမွေးဖွားလာပြီးနောက်အဲလ်ဆာအားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို“ စိတ်ရှုပ်ထွေးဖွယ်ရာ” အယူအဆကို“ လွှတ်ပေး” ရန်နှင့်“ ခန့်မှန်းသူများ၊ ဖြစ်စဉ်များနှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေ” သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ငါသတိပြုမိသည့်အတိုင်းဤတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်သည်နှစ်အနည်းငယ်ကြာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်၎င်းကိုတရားဝင်ဖော်ပြပြီးသောကြောင့်စိတ်သက်သာရာရခဲ့သည်။
သို့သော်နောင်ကာလများတွင်“ မပြီးဆုံးသေးသောစီးပွားရေး” ဟူသောအဓိပ္ပာယ်မှာသိသာထင်ရှားလာသည်။ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်လိုအပ်နေသေးသောနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုရှိသေးသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ လှည့် အေးခဲ II ယခုကျွန်ုပ်သည်လှုံ့ဆော်မှုအတွက် (ငါ့သမီးအဲလ်ဆာနှင့်အန္န၏နောက်ထပ်စွန့်စားမှုသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည်နှင့်အမျှ) အန္နကိုကိုးကားပြီးလက်ဝါးကပ်တိုင်၌“ ရွေးချယ်မှု - ထိတွေ့မှုအဖြစ်အခြားရွေးချယ်စရာရှင်းပြချက်” စည်းဝေးကြီးတွင်လျှောက်ထားစဉ်သူမ၏စကားများ၏မိုက်မဲမှုကိုတွေ့မြင်ရန်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုအားပေးတိုက်တွန်းသည်။ -sectional ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအကျိုးသက်ရောက်မှုသုတေသန။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကျိုးသက်ရောက်မှုစာတမ်းများ၏ဆွေးနွေးမှုကဏ္sectionsများနှင့်စာဖတ်သူမည်သူမဆိုအကျွမ်းတ ၀ င်ရှိသော်လည်းပုဒ်မအလိုက်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသောစာတမ်းများကိုသိသောကြောင့်စာရေးသူသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းအကြားတွေ့ရှိခဲ့သောမည်သည့်အသင်းအဖွဲ့ကိုမဆိုသတိပြုရန်သတိပေးသည်။X) နှင့်လေ့လာမှုအောက်ရှိယုံကြည်မှု, သဘောထားသို့မဟုတ်အပြုအမူ (Y)“ ရွေးချယ်ခြင်း - ထိတွေ့မှု” ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ (ဆိုလိုသည်မှာလိင်ဆိုင်ရာလူမှုမီဒီယာတွင် (ဆိုလိုသည်မှာလိင်ဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာများမှလွှမ်းမိုးမှုခံရသည့်သူများသည်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာတွင်ပါ ၀ င်သည့်လိင်မှုကိစ္စမီဒီယာအကြောင်းအရာကိုဆွဲဆောင်သောယုံကြည်မှု၊ သဘောထားသို့မဟုတ်အမူအကျင့်ပုံစံရှိသူများ။ ယုံကြည်ချက်, သဘောထား, ဒါမှမဟုတ်အပြုအမူ၏ညှနျကွား) ။ တနည်းအားဖြင့်စာရေးသူအယူအဆရေးရာနှင့်သီအိုရီအငြင်းပွားမှုများစာမျက်နှာများကိုကြားမှသူတို့တစ် ဦး အပြစ်လွတ်စေမှမြှုပ်နှံသောရပ်တည်ချက်ချမှတ်ပါလိမ့်မယ် X → Y သူတို့ရဲ့စာပေပြန်လည်သုံးသပ်အပိုင်းအတွက်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့်အဖြစ်နည်းတူဖွယ်ရှိသောအမှုဖြစ်ပါတယ် Y → X။ စာရေးသူသည်ဆက်နွယ်မှု၏ညှနျကွားမှုကို "untangle" ရန် "longitudinal research" ကိုခေါ်လိမ့်မည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာမှလွန်ခဲ့သောနှစ်များမှယနေ့အထိဆွေးနွေးခြင်းကဏ္ofများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်လိင်မှုကိစ္စနှင့်ဆိုင်သောလူမှုဆက်ဆံရေးကဲ့သို့ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကြောင့်ကဏ္ porn အလိုက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ - ရလဒ်အသင်းအဖွဲ့များသည်အမြဲတမ်းမှန်ကန်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒီအန်နာကိုးကားရန် "ပြောင်းလဲဘယ်တော့မှ" ။
၎င်းသည်သိပ္ပံပညာနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်သည်။ သိပ္ပံပညာတွင်ဗဟုသုတအသစ်များဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှသိပ္ပံဆိုင်ရာအသိပညာသည်“ ပြောင်းလဲလာသည်။ Arendt နှင့် Matthes အရ (2017)“ သိပ္ပံပညာသည်လေ့လာမှုတစ်ခုစီသည်ယခင်အလုပ်အပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသည်” (စ။ ၂) တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Hocking နှင့် Miller အရ (1974), "သိပ္ပံပညာရှင်များခြစ်ရာကနေသုတေသနစတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သူတို့သည်ယခင်အသိပညာဗဟုသုတတိုးပွားလာသည်။ ” (စ။ ၁) ။ Sparks အရ (2013), သိပ္ပံ "ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ပွင့်လင်း - အချိန်ကုန်သကဲ့သို့, အသစ်သောသက်သေအထောက်အထားအသစ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းအကြောင်းကိုစဉ်းစား၏စဉ်းစားတွေးခေါ်နည်းလမ်းများပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်မျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါ" (စ။ 14) ။
လိင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောရှင်းလင်းချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်သောကြာရှည်သောလေ့လာမှုများမရှိပါကပုဒ်မအလိုက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကျိုးသက်ရောက်မှုလေ့လာမှုများကိုအပြာစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရလဒ်အကြားတွေ့ရှိရသည့်သိသာထင်ရှားသည့်အသင်းအဖွဲ့များအတွက်အညီအမျှယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် (s) သူတို့လေ့လာခဲ့သည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်သက်သေအထောက်အထားများရှာဖွေတွေ့ရှိသော်လည်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိသော Cross-lag longitudinal paper မ်ားကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများရှိကြောင်းငါသိ၏။ Cross-lagged longitudinal လေ့လာမှုကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ panel ကိုဒေတာကိုအသုံးပြုသည် X → Y နှင့် Y → X ၏ directionality များအတွက်ရှင်းလင်းချက် XY စပ်လျဉ်းသင်္ဘော။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အစောပိုင်းစံနှုန်းများကို covariate အဖြစ်ထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့်သိသာထင်ရှားသည့်အလားအလာရှိသောအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုသည်ခန့်မှန်းသူသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတစ် ဦး ချင်းအပြန်အလှန်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုအပြင်အခြားလေ့လာမှုများရှိပါကကျွန်ုပ်သည်ဂူဂဲလ် Scholar ရှာဖွေမှုကိုအောက်ပါစည်းမျဉ်းများဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ (၁)“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ”“ ရွေးချယ်မှု - ထိတွေ့မှု”“ လွန်စွာနောက်ကျခြင်း” နှင့် (၂)“ အပြာစာပေရုပ်ပုံ”“ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပွားမှု” "Cross- နောက်ကျ။ " ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဒိုင်းနမစ်နှစ်ခုလုံးဟာကစားနိုင်မှာပါ 2015), ငါသည်လည်း "ညစ်ညမ်း" "အပြန်အလှန်" "Cross- နောက်ကျ။ " ရှာဖွေရေးကောက်ယူ
ဤရှာဖွေမှု၏ရလဒ်များကိုဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည် 1။ လေ့လာမှု ၂၅ ခုအနက်အများစု (၁၄) ခုသည်လိင်မှုဆိုင်ရာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အစောပိုင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည့်ရလဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများရှိခဲ့သော်လည်းအပြန်အလှန်စကားပြောဆိုခြင်းမှာမဖြစ်ခဲ့ပါ။ လေ့လာမှု (၁၀) ခုသည်အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲခြင်း၏သက်သေသာဓကကိုတွေ့ရှိရသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတည်းကသာရွေးချယ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သက်သေသာဓကကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ဇယားအောက်ခြေမှတ်ချက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားခြင်းအရဆက်စပ်မှုပုံစံသည်ခြုံငုံ။ အပြန်အလှန်လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်စေ၊
ရလဒ်၏အစောပိုင်းအဆင့်များကိုတွက်ချက်ပြီးနောက်သိသာထင်ရှားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ→ရလဒ်အသင်းအဖွဲ့များကိုတွေ့ရှိခဲ့သည့် longitudinal panel လေ့လာမှုများကိုလည်းသတိပြုပါ။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများဥပမာဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည် 2။ Collins et al အဖြစ်။ (2004မီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပထမအကြိမ် longitudinal panel လေ့လာမှုတစ်ခုအရ“ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုများသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များအတွက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တည်မှု၏ရှင်းလင်းချက်ကိုဖော်ပြခြင်း” (စ။ ၂၈၇) တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အရ၊ အပိုင်းအလိုက်လေ့လာမှုများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှုများ၊ သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအကြားသိသာသောဆက်စပ်မှုများသည်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့မှုလုံးဝကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းသည်စုဆောင်းထားသည့်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်ဆန့်ကျင်။ ဒquoteနတစ်ခုမှသာထောက်ခံနိုင်သည် (ကိုးကားခြင်းကိုတန်ပြန်ရန်) Arendt & Matthes, 2017; Hocking & Miller, 1974; Sparks, 2013) သိပ္ပံပညာသည်စုဆောင်းခြင်းမရှိသောလေ့လာမှုတစ်ခုစီဖြစ်ပြီးလေ့လာမှုတစ်ခုချင်းစီသည်သီးခြားသီးခြားအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုချင်းစီမှသိပ္ပံပညာရှင်များသည်အစမှစတင်ရမည်။ နှင့်သိပ္ပံပြုပြင်မွမ်းမံ - ပွင့်လင်းဖို့မဖွင့်ကြောင်း - မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအချိန်နှင့်သက်သေအထောက်အထားအသစ်၏မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ဖြစ်ရပ်ဆန်းစဉ်းစားတွေးခေါ်နည်းလမ်းများပြန်လည်ပြင်ဆင်မရသင့်ပါတယ်။
စာရေးသူ: ရွေးချယ် - ထိတွေ့မှုသည်သင်၏တွေ့ရှိချက်များအတွက်ထပ်တူထပ်မျှယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်အခြားရှင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမဖော်ပြပါနှင့်။ အကယ်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်သူများနှင့်အယ်ဒီတာများကသင့်အားတောင်းဆိုပါကဤစာကိုပေးပါ။ အကယ်၍ ၎င်းတို့က၎င်းတို့အားဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါက၊ မဖြစ်မနေထုတ်ပြန်ရမည့်“ ကန့်သတ်ချက်” ကြေငြာချက်အားသင့်အားဤမပြည့်စုံသောထင်မြင်ချက်မှသင်အားလွတ်မြောက်စေပြီးဤပေးစာကိုကိုးကားပါ။
သုံးသပ်သူများ အကယ်၍ သင်တို့၏အချက်အလက်နှင့်တွေ့ရှိချက်များသည်အဘယ်ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောထူးခြားဆန်းသစ်သောဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည့်အကြောင်းအရင်းကိုတိတိကျကျဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါကရွေးချယ်ခြင်းထိတွေ့ခြင်းသည်၎င်းတို့၏ရလဒ်များအတွက်အလားတူဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအခြားရွေးချယ်စရာရှင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြရန်စာရေးသူအားမတောင်းဆိုပါနှင့်။ စာရေးသူဖော်ပြသောညစ်ညမ်းသောလူမှုရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများသည်အမှန်တကယ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်သာသက်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစာပေအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြထားသည်။ အကယ်၍ စာရေးသူများကကြေငြာချက်ကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပါက၎င်းကိုဖယ်ရှား။ ဤစာသို့ပို့ပါ။
အယ်ဒီတာများ - စာရေးသူများကရွေးချယ်သောထိတွေ့မှုအတွက်အသိပေးချက်ကိုတောင်းဆိုရန်တောင်းဆိုထားသောသတင်းအချက်အလက်မရှိသောပြန်လည်သုံးသပ်သူများအားပယ်ဖျက်ပါ။ ဒီစာ၏စာရေးဆရာများကိုအသိပေးပါ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲမှုအတွက်အမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းရွေးချယ်ခြင်းထိတွေ့မှုအတွက်ကိစ္စအားလက်ရှိစာပေအခြေအနေအရမဖြေရှင်းနိုင်သေးကြောင်းအကြံပြုပါ။
ဇယား ၁ - လိင်မှုဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးနှင့်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ပတ်သက်သောရှင်းလင်းချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာသည့်ရှည်လျားသောအလျားလိုက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသက်ရောက်မှုများလေ့လာမှုများ
ဇယား ၂ - သတ်မှတ်ထားသောကိန်းဂဏန်းသည်လိင်မှုဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများနောက်ကျကျန်ခဲ့သည်
Arendt, အက်ဖ်, & Matthes, ဂျေ (2017) ။ မီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှု: အယူအဆစမ်းသပ်ခြင်း၏နည်းလမ်းများ။ မီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှုများနိုင်ငံတကာစွယ်စုံကျမ်း. https://doi.org/10.1002/9781118783764.wbieme0024.
Braithwaite, SR, Aaron, SC, Dowdle, KK, Spjut, K. , & Fincham, FD (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်အကျိုးခံစားခွင့်များရှိသောသူငယ်ချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းကိုတိုးပွားစေပါသလား လိင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှု, 19, 513-532 ။ https://doi.org/10.1007/s12119-015-9275-4.
Braithwaite, SR, Coulson, G. အ, Keddington, K. , & Fincham, FD (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစာသားများနှင့်ကောလိပ်မှပေါ်ထွက်လာသောလူကြီးများကြားတွင်ချိတ်ဆက်ခြင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 44, 111-123 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-014-0351-x.
ဘရောင်း, JD, & L'Engle, KL (2009) ။ X-rated - အမေရိကန်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများ။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 36, 129-151 ။ https://doi.org/10.1177/0093650208326465.
Collins, RL, Elliott, MN, Berry, SH, Kanouse, DE, Kunkel, D. , Hunter, SB, & Miu, A. (2004) ။ ရုပ်မြင်သံကြားမှလိင်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုစတင်သည်။ ကလေးအထူးကု, 114, e280-e289 ။ https://doi.org/10.1542/peds.2003-1065-L.
Doornwaard, SM, Bickham, DS, Rich, M. , ter Bogt, TF, & van den Eijnden, RJ (2015) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သူတို့၏လိင်စိတ်သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများ - အပြိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဦး တည်ရာသက်ရောက်မှုများ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ, 51, 1476-1488 ။ https://doi.org/10.1037/dev0000040.
Doornwaard, SM, Ter Bogt, TF, Reitz, E. , & Van Den Eijnden, RJ (2015) ။ လိင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအွန်လိုင်းအပြုအမူများ၊ ရွယ်တူချင်းစည်းမျဉ်းများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံ - ပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံကိုစမ်းသပ်ခြင်း။ PLOS ONE, 10(6), e0127787 ။ https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127787.
Gwinn, AM, လမ်းဘတ်, မိုင်, Fincham, FD, & Maner, JK (2013) ။ အပြာစာပေ၊ လူမှုရေးစိတ်ဓာတ်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသိပ္ပံ, 4, 699-704 ။ https://doi.org/10.1177/1948550613480821.
Hocking, JE, & Miller, MM (1974, ,ပြီ) ။ အခြေခံဆက်သွယ်ရေးသိပ္ပံသဘောတရားများကိုဆုံးမ.ဝါဒပေး။ New Orleans, LA ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအသင်း၏အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြသောစာတမ်း။
Kohut, တီ, & Stulhofer, အေ (2018) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၏ကောင်းကျိုးအတွက်အန္တရာယ်ရှိသလား။ နှစ်ခုလွတ်လပ်သော panel ကိုနမူနာအတွက်ယာယီဆက်ဆံရေးတစ်ခုစာမေးပွဲ။ PLOS ONE, 13(8), e0202048 ။ https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202048.
Leonhardt, ND, & Willoughby, BJ (2018) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 54, 64-84 ။ https://doi.org/10.1080/01494929.2017.1359811.
Martyniuk, U. , & Stulhofer, အေ (2018) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်မိန်းမပျိုနှင့်အထီးဆယ်ကျော်သက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်အကြားဆက်နွယ်မှုကိုနှစ်ရှည်လများရှာဖွေလေ့လာခြင်း။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်, 69, 80-87 ။ https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.09.006.
Muusses, LD, Kerkhof, P. , & Finkenauer, C တို့ (2015) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆက်သွယ်မှုအရည်အသွေး - လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအကြားညှိနှိုင်းမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတွင်းအကြားကြာရှည်စွာလေ့လာခြင်း။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာ, 45, 77-84 ။ https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.077.
ပယ်ရီ, SL (2017a) ။ ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးကိုလျှော့ချပါသလား? longitudinal ဒေတာကနေသက်သေအထောက်အထား။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 46, 549-559 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-016-0770-y.
ပယ်ရီ, SL (2017b) ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းသည်ဘာသာရေးကိုလျော့နည်းစေသလား။ Two- လှိုင်း panel ကိုဒေတာကနေအထောက်အထား။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 54, 214-226 ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2016.1146203.
ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2009a) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်အမျိုးသမီးများအားလိင်မှုဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများအဖြစ်ရှုမြင်ခြင်း - ဖြစ်ပွားမှုနှင့်နောက်ခံဖြစ်စဉ်များကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ ဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်, 59, 407-433 ။ https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2009.01422.x.
ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2009b) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ပစ္စည်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ထိတွေ့မှု - ရှည်လျားသောလေ့လာမှု။ လူ့ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 35, 171-194 ။ https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.2009.01343.x.
ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2010a) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာမရေရာမှုများ - ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ကျား၊ မရေးရာကဏ္ role ။ ဆက်သွယ်ရေး Monographs, 77, 357-375 ။ https://doi.org/10.1080/03637751.2010.498791.
ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2010b) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအခြေခံသည့်ဖြစ်စဉ်များ - ရူပါရုံသည်ရူပဗေဒ၏အခန်းကဏ္ role ။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 37, 375-399 ။ https://doi.org/10.1177/0093650210362464.
ပတေရုသဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2011a) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်သက်တူရွယ်တူများ၏လွှမ်းမိုးမှုသည်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ about နှင့်ပတ်သက်သောယုံကြည်ချက်အပေါ်လွှမ်းမိုးမှု - ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားတူညီမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများ။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 14, 511-517 ။ https://doi.org/10.1089/cyber.2010.0189.
ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2011b) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူအပေါ်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအင်တာနက်အချက်အလက်များ၏လွှမ်းမိုးမှု - ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ ကနျြးမာရေးဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်, 16, 750-765 ။ https://doi.org/10.1080/10810730.2011.551996.
ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2014) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအရရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုထိတွေ့ခြင်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာမကျေနပ်မှုကိုတိုးပွားစေပါသလား။ တစ် ဦး က longitudinal လေ့လာမှု။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာ, 36, 297-307 ။ https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.03.071.
Slater, MD (2015) ။ လိမ်ပုံစံများကိုအားဖြည့်ခြင်း - မီဒီယာပါဝင်မှုနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်သဘောထားများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုတို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုသဘောပေါက်ခြင်း မီဒီယာစိတ်ပညာ, 18, 370-395 ။ https://doi.org/10.1080/15213269.2014.897236.
Sparks, GG (2013) ။ မီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှုသုတေသန။ Belmont, MA: Wadsworth ။
Tokunaga, RS, Wright, PJ, & McKinley, CJ (2015) ။ အမေရိကန်လူကြီးများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့။ သုံးလှိုင်း panel လေ့လာမှု။ ကနျြးမာရေးဆက်သွယ်ရေး, 30, 577-588 ။ https://doi.org/10.1080/10410236.2013.875867.
ဗန် Oosten, JM (2016) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမရေရာမှု - စိတ်နေသဘောထားပါ ၀ င်သောပြgနာ၏အခန်းကဏ္။ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 45, 1011-1022 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-015-0594-1.
ဗန် Oosten, JM, ပေတရု, ဂျေ, & Vandenbosch, အယ်လ် (2017) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလိင်ဆက်ဆံလိုစိတ် - ကွဲပြားခြားနားသောဆက်ဆံရေးနှင့်နောက်ခံဖြစ်စဉ်များ။ လူ့ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 43, 127-147 ။ https://doi.org/10.1111/hcre.12098.
ဗန် Oosten, JM, & Vandenbosch, အယ်လ် (2020) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာသဘောဆန္ဒမပါသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုလွှဲပြောင်းခြင်းတွင်ပါဝင်လိုစိတ်ရှိခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်၏အဓိကကျသောအယူအဆများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 49, 1121-1132 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-019-01580-2.
Vandenbosch, အယ်လ်, & Eggermont, အက်စ် (2013) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်ခြင်း - အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုများနှင့်အပျိုဖော်ဝင်အခြေအနေ၏အလယ်အလတ်အဆင့်ကဏ္ role ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပေါ်သုတေသနဂျာနယ်, 23, 621-634 ။ https://doi.org/10.1111/jora.12008.
Vandenbosch, အယ်လ်, & ဗန် Oosten, JM (2017) ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရန့်ကွက်မှုအကြားဆက်နွယ်မှု - ညစ်ညမ်းသောစာတတ်မြောက်မှုပညာ၏အခန်းကဏ္ att လျော့နည်းစေသည်။ ဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်, 67, 1015-1036 ။ https://doi.org/10.1111/jcom.12341.
Vandenbosch, အယ်လ်, & ဗန် Oosten, JM (2018) ။ လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြထားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်ကျပန်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှင်းပြခြင်း - အဆင့်နှစ်ဆင့်ကြားဝင်စေ့စပ်ခြင်းပုံစံ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 47, 1465-1480 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-017-1145-8.
Vandenbosch, အယ်လ်, ဗန် Oosten, JM, & ပေတရု, ဂျေ (2018) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်နိုင်မှုရည်မှန်းချက်။ မီဒီယာစိတ်ပညာ, 21, 50-74 ။ https://doi.org/10.1080/15213269.2017.1361842.
ရပ်ကွက်, LM, Vandenbosch, အယ်လ်, & Eggermont, အက်စ် (2015) ။ ယောက်ျားမဂ္ဂဇင်းများ၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ယောက်ျားလေးများသည်ဘက်လိုက်ခြင်းနှင့်ပိုးပန်းခြင်းယုံကြည်မှုများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်, 39, 49-58 ။ https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2014.12.004.
Wright, PJ (2012) ။ ယူအက်စ်အရွယ်ရောက်သူများ၏အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြာရှည်စွာဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း - လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်း - နှင့်မပျော်ရွှင်မှု၏အလယ်အလတ်အခန်းကဏ္ role ။ မီဒီယာစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 24, 67-76 ။ https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000063.
Wright, PJ (2013) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်သဘောထားပြောင်းလဲခြင်းကိုကြိုတင်တည်ရှိနေသောယုံကြည်ချက်များကိုလှိုင်းသုံးလိုင်း longitudinal analysis ။ ဆက်သွယ်ရေးအစီရင်ခံစာများ 26, 13-25 ။ https://doi.org/10.1080/08934215.2013.773053.
Wright, PJ (2015) ။ လက်မထပ်မီလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုအပေါ်အမေရိကန်၏သဘောထားများ - အမျိုးသားအဆင့်လေ့လာဆန်းစစ်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 44, 89-97 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-014-0353-8.
Wright, PJ (2021) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုတေသနတွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားပါ - ၎င်းကိုလွှတ်လိုက်ပါ၊ သွားခွင့်ပေးပါ။ [အယ်ဒီတာထံပေးစာ] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း. https://doi.org/10.1007/s10508-020-01902-9.
Wright, PJ, & Bae, အက်စ် (2013) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းအပေါ်သဘောထားများ - အမျိုးသားရေရှည်လေ့လာမှု။ လူ့ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 39, 492-513 ။ https://doi.org/10.1111/hcre.12009.
Wright, PJ, & Bae, အက်စ် (2015a) ။ ယူအက်စ်အရွယ်ရောက်သူများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ကလေးမွေးဖွားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပေါ်သဘောထား - အမျိုးသားလေ့လာမှုလေ့လာမှု။ လိင်ကျန်းမာရေးအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 27, 69-82 ။ https://doi.org/10.1080/19317611.2014.944294.
Wright, PJ, & Bae, အက်စ် (2015b) ။ အမျိုးသားရေးအလားအလာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုလေ့လာမှုနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ်ထားရှိသောသဘောထားများ။ လိင်မှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၊ 1, 444-463 ။ https://doi.org/10.1007/s12119-014-9264-z.
Wright, PJ, & Funk, အမ် (2014) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အပြုသဘောဆောင်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုဆန့်ကျင်ခြင်း။ လပတ်အမျိုးသမီးများ၏စိတ်ပညာ, 38, 208-221 ။ https://doi.org/10.1177/0361684313498853.
Wright, PJ, & Randall, AK (2014) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်တိုက်စားသုံးမှု၊ ပညာရေးနှင့်လိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်ထောက်ပံ့မှုအမေရိကန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားများကြားတွင်။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 41, 665-689 ။ https://doi.org/10.1177/0093650212471558.
Wright, PJ, & Tokunaga, RS (2018a) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်ချိတ်ဆက်မှု - အပိုင်းအမျိုးမျိုးနှင့် longitudinal အမျိုးသားစစ်တမ်းများမှရလဒ်များ။ လိင်ကျန်းမာရေးအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 30, 111-123 ။ https://doi.org/10.1080/19317611.2018.1451422.
Wright, PJ, & Tokunaga, RS (2018b) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု၊ လိင်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအတွက်ပံ့ပိုးမှု - အမျိုးသားလေ့လာမှုလေ့လာမှုနှစ်ခုမှရလဒ်များ။ မီဒီယာစိတ်ပညာ, 21, 75-92 ။ https://doi.org/10.1080/15213269.2016.1267646.
Wright, PJ, Tokunaga, RS, & Bae, အက်စ် (2014) ။ တစ် ဦး dalliance ထက်ပို? ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်တိုက်စားသုံးမှုနှင့်လက်ထပ်ထားသောအမေရိကန်အရွယ်ရောက်သူများအကြားလိင်နှင့်မသက်ဆိုင်သောလိင်သဘောထားများ။ လူကြိုက်များသောမီဒီယာယဉ်ကျေးမှုစိတ်ပညာ, 3, 97-109 ။ https://doi.org/10.1037/ppm0000024.